Ogologo Usoro Mgbasa Ozi na-ewe obi ike | Martech Zone
Ogologo Usoro Mgbasa Ozi na-ewe obi ike
Tuesday, July 7, 2009 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Mgbe mụ na ndị ahịa rụkọrọ ọrụ n’oge gara aga na mkpọsa ozi na-ezighi ezi, isi ihe ga-aga nke ọma bụ ọtụtụ ozi dị mkpa ewetara ọtụtụ oge. Aga m adọ ndị mgbasa ozi aka na ntị gbasara izipu ozi na-ezipụ otu oge ma na-atụ anya nsonaazụ dị ukwuu. Ugboro ugboro, anyị nyere ndị ahịa anyị ihe akaebe na oge na mkpa dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma.
N’agbanyeghi otu I tozuru ndi na ege gi nti, nke bu eziokwu bu na otu ozi di ka itinye ozi n’ime karama ma na-eche nzaghachi. Nke a apụtaghị na mkpọsa ndị a enweghị mmetụta ma ọ bụ nweghachi na ntinye ego… ha na-emekarị. [Foto mara mma dị na Agwọ Blog]
Mgbasa ozi mgbasa ozi na-adịte aka na-arụ ọrụ dị ka imejuwanye mmasị, n'agbanyeghị. Na ikwughachi ozi, ị naghị asụ nsụ… ị na-enyekwu ohere maka ozi ahụ ijide. Ikekwe oge mbụ, onye ọbịa ahụ enweghị oge iji nyochaa ọzọ… ma ọ bụ ikekwe onye na-agụ ya enweghị ohere ịzụta ma ọ bụ itinye aka n'oge ahụ.
Strategic marketing na ika ahịa ọkachamara n'anya ogologo oge mkpọsa ahịa n'ihi na ọ na-enye ha ohere oge ntapu or aghụghọ ọzọ tidbits nke ozi ofụri mkpọsa. Kama ịmanye ike maka ọgụ dị mkpirikpi, nrụgide dị elu, ahịa ahụ na-echere ka ndị ahịa bịakwute ha. Onye ahịa ahụ chọrọ ịbịakwute ha mgbe gụsịrị akwụkwọ, wuo mmekọrịta, ma mata n'ụzọ zuru ezu ohere.
Taa, enwere m obi ụtọ ịgwa Jascha Kaykas-Wolff okwu, VP ahịa nke Webtrends anyị tụlekwara otu egwuregwu a siri dị ụtọ. Mgbaghara ọzọ, mana m ga-atụnyere ya ịtụba ahịrị n'ime mmiri ma ọ bụ ịpịa mmiri na ịzọgharị. Nwere ike ijide azụ oge ọ bụla ị tụbara ahịrị, mana ị ga - eduga ọtụtụ azụ karịa… na azụ buru ibu… mgbe ị chum na-agagharị mmiri.
Webtrends na-arụ ọrụ na a pụrụ nnọọ iche ahịa atụmatụ ugbu a… na ọ na-eme ozi ọma. Ana m atụ anya na-ele atụmatụ na-egwu oge na-aga na-ahụ ụlọ ọrụ mmeghachi omume. Eziokwu ahụ bụ na ọ natalarị mgbasa ozi (ọbụlagodi ụfọdụ adịghị mma) bụ ihe ịtụnanya.
Usoro dị mkpirikpi anaghị enwekarị ihe egwu kama ọ na-eweta nsonaazụ obere na obere obere. Atụmatụ dị ogologo oge mgbe ụfọdụ nwere nnukwu ihe egwu mana mkpụrụ na-adịkarị ukwuu mgbe ọ na-arụ ọrụ. Ma, a na-enyeghachi obi ike ịzụ ahịa. Ana m asọpụrụ ụlọ ọrụ na atụmatụ dị ogologo oge karị. Ọ bụ ya mere m ji arụ ọrụ kachasị na nyocha ọchụchọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta… Ekwenyere m na ha bụ ụkpụrụ nke atụmatụ ogologo oge. Atụmatụ dị ogologo na-esetịpụ atụmanya dị ukwuu na; n’ihi nke a, ndị ahịa nwere obi ụtọ.
Tags: Jascha Kaykas-Wolffusoro ahiaatụmatụwebụsaịtị
Jul 8, 2009 na 5: 50 AM
Doug, nke a bụ kpọmkwem ihe m na-eme na otu n'ime ọrụ m. Ogologo oge dị anya, ire ere dị nro ma ọ bụ enweghị ire, gbado anya na ụlọ ụlọ nke mbụ. Maka m, obere oge usoro nrụgide dị elu dị ka ihe dị ize ndụ!